Makumi makumi matatu ematani emanyowa manyowa ekugadzira - YiZheng Heavy Machinery Co, Ltd.
Mutsara wekugadzira wepagore wemakumi matatu ezviuru ematani efotereza ndeye kushandura ese marara ehupenyu kuva organic fetiraiza kuburikidza nemaitiro akasiyana. Bioorganic mafetiraiza mafekitori haagone chete kushandura huku manyowa nemarara kuita pfuma, kugadzira hupfumi mabhenefiti, asi zvakare kudzikisira kusvibiswa kwezvakatipoteredza uye kugadzira zvakatipoteredza mabhenefiti. Maumbirwo ezvimedu anogona kunge ari cylindrical kana idenderedzwa, izvo zviri nyore kutakura nekushandisa. Chigadzirwa chinogona kusarudzwa zvinoenderana nezvaunoda chaicho.
Isu tinopa iyo dhizaini dhizaini uye kugadzira kweye itsva buffer granulation yekugadzira tambo ye organic fetiraiza. Iyo yekugadzira tambo michina inonyanya kusanganisira hopper uye feeder, nyowani buffer granulation muchina, dryer, roller roller sieve muchina, bhaketi chitakuriso, bhandi rinotakura, muchina wekurongedza uye zvimwe zvekubatsira michina.
Yakapfuma yakasikwa mbishi zvinhu zviwanikwa
Organic fetiraiza mbishi zvigadzirwa zvakapfuma mune zviwanikwa, izvo zvinonyanya kuve zvakakamurwa muzvikamu zvinotevera. Zvinhu zvakasiyana zvinogona kusanganiswa nemhando dzakasiyana dzekugadzira:
1. Tsvina yemhuka: dzakadai sehuku, nguruve, dhadha, mombe, makwai, mabhiza, tsuro, nezvimwewo, zvisaririra zvemhuka, senge chikafu chehove, kudya kwemabhonzo, minhenga, furhu, mupfudze wesikonye, ​​madziva ebiogas, nezvimwe.
2. Tsvina yezvekurima: huswa hwezvirimwa, rattan, sosiya yekudya, chikafu chakabikwa, chikafu chekotoni, kudya kwesiriki riya, hupfu hwembiriso, zvisaririra zvehowa, nezvimwe.
3. Maindasitiri marara: waini slurry, vhiniga zvisaririra, mufarinya zvakasara, firita madhaka, mushonga wekusara, furfural slag, nezvimwe.
4. Sludge yeMasipala: dope rerwizi, sludge, dope dope, dope regungwa, dhamu dhamu, humic acid, turf, lignite, sludge, kubhururuka dota, nezvimwe.
5. Marara epamba: marara ekicheni, nezvimwe.
6. Diction kana dhizaini: dhamu remakwenzi egungwa, hove yehove, nezvimwe.
1. Semi-yakanyorova zvinhu crusher inoshandiswa kuti iwedzere kuchinjika kune hunyoro zvemukati mbishi zvigadzirwa.
2. Iyo michina yekudhiza michina inogadzira iyo idenderedzwa reyese saizi yunifomu, iyo nzvimbo yakatsetseka, uye simba iri rakakwirira. Inokodzera kubatanidza neakasiyana magranulators.
3. Tambo yese yekugadzira yakabatana nebhandi conveyor uye nezvimwe zvinotsigira michina.
4.Compact chimiro, kugadzikana kuita, kushanda kwakanaka uye kugadzirisa.
5. Chigadzirwa chacho chinogona kusarudzwa zvinoenderana nezvaunoda chaizvo.
Maitiro acho anosanganisira yekuvirisa michina, chisanganiso, granulation muchina, unoomesa, unotonhorera, roller roller nesefa muchina, silo, yakazara otomatiki yekupakata muchina, yakamira crusher, bhandi conveyor, nezvimwe. Iyo yekutanga kugadzirwa maitiro eiyo ese organic fetiraiza anosanganisira: kukuya kwezvinhu zvakasvibirira → kuvirisa → kusanganisa kwezvinhu (kusanganisa nezvimwe zvakasikwa-zvisina kugadzirwa zvinhu, NPK≥4%, organic chinhu ≥30%) → granulation → kurongedza. Ongorora: iyi tambo yekugadzira ndeye yekureva chete.
Iyo yekuvirisa maitiro inoora zvizere marara ehupenyu mukuita nekukora. Mapulagi akasiyana akadai sekufamba marara, ma-helix marumpers, mapuragi ane grooved, groove hydraulic dumpers uye marumpers anoteedzerwa anogadzirwa nekambani yedu anogona kusarudzwa zvinoenderana nemanyowa chaiwo, nzvimbo uye zvigadzirwa.
2. Muchina wekupwanya
Iyo yakaviriswa mbishi zvinhu inopinda yakatwasuka cheni grinder, iyo inogona kupwanya mbishi zvinhu zvine zvemvura zviri pasi pe30%. Iyo saizi kukura inogona kusvika 20-30 maodha, ayo anosangana neiyo granulation zvinodiwa.
3. Horizontal chisanganiso
Mushure mekupwanya, wedzera iyo yekubatsira zvinhu zvinoenderana nesystem uye sanganisa zvakaenzana mu blender. Horizontal musanganisi ane sarudzo mbiri: uniaxial chisanganiso uye kaviri-axis musanganisi.
4. A new organic organic fetiraiza granulator
Iyo inokodzera granulation chiyero chemuchina iyi yakakwira se90%, inoenderana nenzira dzakasiyana dzakasiyana. Simba rekumanikidza rezvimedu rakakwirira kupfuura iro redhisiki dhiramu uye dhiramu granulation, uye iyo hombe idenderedzwa mwero iri pasi pe15%.
5. Kutenderedza kutenderera
Muchina wekutenderedza unogona kugadzirisa uye runako iyo granulation particles mushure megirazi. Mushure mekuburitsa granulation kana dhisiki granulation maitiro, mushure mekukanda kutenderera, iyo fotereza zvidimbu zvinogona kuva yunifomu muhukuru, kutenderera kwakaringana, kupenya uye kutsetseka pamusoro pechiso, hombe tambo simba, uye idenderedzwa goho refetiraiza yakakwira se98%.
6. Dry uye inotonhorera
Iyo roller inotonhora inotonhodza zvidimbu pane imwe tembiricha mushure mekuomesa, uye inoderedza mvura yemukati yezvimedu zvakare ichideredza iyo tembiricha tembiricha.
7. Roller nesefa
Inonyanya kushandiswa kupatsanura zvigadzirwa zvakapedzwa kubva kuzvinhu zvakashandiswazve. Mushure mekusiya, zvinokwanisika zvidimbu zvinodyiswa mumuchina wekupfekedza, uye zvisina kukodzera zvidimbu zvinopihwa mukati mekutenderera cheni crusher kuti itorezve, nokudaro ichizadzisa chigadzirwa kupatsanura uye yunifomu kupatsanura kwezvakapedzwa zvigadzirwa. Iyo muchina inotora yakasanganiswa skrini, iri nyore kuchengetedza uye kutsiva. Maumbirwo ayo ari nyore, ari nyore kushandisa uye anotsvedzerera. Yakadzikama, chishandiso chakakosha mukugadzira fetiraiza.
Iko kupfeka kwezvikwanisirwa zvidimbu kuburikidza nemuchina wekuputira muchina kwete chete kunoita kuti maarticles ave akanaka, asi zvakare inovandudza kuomarara kwezvimedu. Iyo michina yekumhanyisa muchina inotora yakakosha emvura yekupfira tekinoroji uye yakasimba poda yekumwaya tekinoroji kunyatso kudzivirira fetiraiza inodzivirira.
9. otomatiki kurongedza muchina:
Mushure mokunge zvidimbu zvakaputirwa, zvakaiswa mukati nemuchina wekurongedza. Mushonga wekupakata une dhigirii yakakura yekushandisa, kusanganisa kuyera, suture, kurongedza uye kutakura, izvo zvinoona kukurumidza kuwanda kwepakeji uye zvinoita kuti iko kurongedza kuve kwakanyatsoita uye kwakarurama.
10. Bhandi rinotakura:
Iyo yekufambisa inoita chikamu chakakosha mukugadzirwa kwemaitiro, nekuti inobatanidza zvikamu zvakasiyana zveyese mutsara wekugadzira. Pane ino komputa yekugadzira fureni mutsara, isu tinosarudza kukupa iwe nebhandi rinotakura. Inofananidzwa nemamwe marudzi eanofambisa, mabhandi anotakura ane kufukidzwa kwakakura, zvichiita kuti yako yekugadzira nzira inyatsoita uye ishandise mari.